| မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Vietnam -vietnam-investment.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Vietnam ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
မြို့တော်:ဟနွိုင်း(ha Noi တွင်)
ဧရိယာ:330,000 1,051 စတုရန်းကီလိုမီတာ(ထိုင်ဝမ်၏အကြောင်းကို9ကြိမ်အရွယ်အစား)
ပြည်သူ့အင်အား:အကြောင်း 99 လူဦးရေသန်း(နိုဝင်ဘာလ 2016),54 အဆွေအမျိုးသူတစ်ဦးစုစုပေါင်း,နှင့်&quote;Kin&quote; (Kinh)အကြီးဆုံးမိသားစုများအတွက်(အကြောင်း 85.7%),တရုတ် 200 ခန့်လူဦးရေသန်း.
တည်နေရာ:အအင်ဒိုချိုင်းနားကျွန်းဆွယ်၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသော,မြောက်ဘက်သို့နှင့်ကွမ်ရှီးကျွမ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ယူနန်ပြည်နယ်,လာအိုနှင့်ကမ္ဘောဒီးယား၏အနောက်ဘက်,Dongbin&quote;တိုကျိုပင်လယ်အော်&quote; (ဗီယက်နမ်ကိုခေါ်&quote;Beibu ပင်လယ်ကွေ့&quote;)နှင့်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်(ဗီယက်နမ်ကိုခေါ်&quote;Donghai&quote;),အ S ကိုတလျှောက်လုံးကျဉ်းမြောင်းတဲ့-ကဲ့သို့.3/တောင်တော်သစ်တောများများအတွက်နယ်မြေ 4,လွင်ပြင်အဓိကအားဖြင့်မြောက်ပိုင်းနီမြစ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့်တောင်ပိုင်း Kowloon မြစ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အတွက်ဖြန့်ဝေနေကြသည်.အဓိကဆိပ်ကမ်းမြောက်ဘက်တွင် Hai Phong ပါဝင်,တောင်ဘက်တွင် Da Nang,တောင်ဘက်တွင်တောင်ဘက်နှင့်ဟိုချီမင်းစီးတီးရှိတောင်ဘက်နှင့် Vung Tau အတွက် cam Ranh.အဓိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ်ကွင်းသည်&quote;Noi တွင် Bai&quote;ဟနွိုင်းနှင့်ထဲမှာလေဆိပ်&quote;Tan ကသားတော်ကို nhat&quote;ဟိုချီမင်းစီးတီးရှိလေဆိပ်.
ရာသီဥတု:နွေးသမများနှင့်အပူပိုင်းမုတ်သုံရာသီဥတု.မြောက်ကိုရီးယားဗီယက်နမ်နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ,ရာသီဥတုယခုနှစ်ဆင်တူသည်,နှစ်-ပတ်ပတ်လည်ပူနှင့်စိုစွတ်သော,မိုးရေ,ခြောက်သွေ့သောနှစ်ဦးရာသီ,မိုးရာသီ5မှ 10 လအတွင်း,ခြောက်သွေ့ရာသီအတွက်ဧပြီလ 11 ရက်.ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနဲ့နွေရာသီအတွက်ပျမ်းမျှအပူချိန် 16.5 နှင့် 26.8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်,လိုအပ်သလို,နှင့်ဟိုချီမင်းစီးတီး 25 ဖြစ်ပါတယ်.8 နှင့် 28 ရက်.9 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်.
တရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်း:70 ကျော်,ဗီယက်နမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် 000 ကလူ,နှင့်ဟိုချီမင်းစီးတီးရှိ 1997 ခုနှစ်တွင်ထိုင်ဝမ်ကျောင်းတွေတည်ထောင်ခဲ့.အဘယ်သူမျှမရှိတယ်&quote;ပင်လယ်ရပ်ခြားတရုတ်&quote;ဗီယက်နမ်,ဒါပေမယ့်ခန့် 1 လူဦးရေသန်းရှိပါတယ်&quote;တိုင်းရင်းသားအုပ်စု&quote; (ဗီယက်နမ်များအတွက်,ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် 54 တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ).သူတို့ထဲကအများစုဟာတောင်ဘက်တွင်အာရုံစိုက်နေကြတယ်,Guangzhao ခွဲခြား,Chaozhou,ဖူ,အဘိဓါန် Hakka နှင့်ဟိုင်နန်ငါးကြီးတွေအကူအညီနဲ့.ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်တံခါးဖွင့်ကတည်းက,ထိုင်ဝမ်,ဟောင်ကောင်,မကာအိုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှအခြားသောနေရာများ,တရုတ်သင်ယူခြင်းမြတ်သောအလုပ်ရှာကြာတဲ့ဖြတ်လမ်းဖြစ်လာသည်.
နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒက:ဗီယက်နမ်သံတမန်ရေးယခုကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးစနစ်များနိုင်ငံများနှင့်အပြန်အလှန်ခိုင်ခံ့စေဖြစ်ပါတယ်,တစ်ဖွဲ့လုံးကတိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးစနစ်ထဲကိုပေါင်းစပ်.လွန်ခဲ့သည့်ခြောက်နှစ်ကတည်းက,ဗီယက်နမ် 185 နိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိခဲ့သည်,ပြည်နယ်၏နိုင်ငံခြားအကြီးအကဲများ,ချုပ်ဝန်ကြီးတွေ,ပို. ပို. အဆုံးမဲ့သွားရောက်ဝန်ကြီးများသို့မဟုတ်အခြားဟဲဗီးဝိတ်,ပြင်သစ်အမျိုးသားထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြင်(1997),အရှေ့ဘက်(2004),အာဆီယံညီလာခံ(2001),အာရှ-ဥရောပထိပ်သီးအစည်းအဝေး(2004),အေပက်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး(2006),အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး(2010),အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏(ADB က)ခုနှစ်(2011),2007 ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမဟုတ်သော, 2009 မှကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက 2008 အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်-အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်,အရှေ့ညီလာခံ၏သမ္မတအဖြစ် 2010 ခုနှစ်,2017 APEC ကျင်းပလိမ့်မည်.
ငွေကြေး:ဒိုင်း(dong),1 အမေရိကန်$22,500 Shield ကို
စုစုပေါင်းတင်ပို့မှု: $162.11 ဘီလျံ.
စုစုပေါင်းတင်သွင်းမှု: $165.65 ဘီလျံအထိ.
ပြည်ပကြွေးမြီ: $110 ဘီလီယံအထိ(2014 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ).
အကြောင်း2ဗီယက်နမ်အမျိုးသားရေးပျှမ်းမျှဝင်ငွေ,109 အမေရိကန်ဒေါ်လာ(2015).
ဗီယက်နမ်'s ကိုအလုပ်သမားအင်အား 54 ရောက်ရှိ.32 လူဦးရေသန်း,572 တိုးပွားလာလုပ်သားအင်အား,ယခင်တစ်နှစ်ကျော် 000,မြို့တော်ကို3အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည်.29%,ကျေးလက်နေ 1.83% (2015).
ဗီယက်နမ်,တိုင်းပြည်(မွောကျ,တရုတ်နိုင်ငံ,တောင်ဗီယက်နမ်)လတ္တီတွဒ်ကြောင့်,ရာသီဥတုကွဲပြားခြားနားသည်,မြောက်ပိုင်းဒေသ(ဟနွိုင်းဧရိယာ),နှင့်ထိုင်ဝမ် Pingtung,အလားတူ Kaohsiung ရာသီဥတု(10 ဒီဂရီ C မှာအဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံအဖြစ်အနိမ့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ,ပိုပြီးထက် 38 ဒီဂရီ C ၏နွေရာသီအပူချိန်မြင့်မား(အပူချိန် 35 ဒီဂရီ C ကိုမှအကြောင်း 26 ဒီဂရီ C မှာဖြစ်ပါတယ်),အဓိကအားဖြင့်နွေရာသီသောအဝတ်ကို,အလယ်ပိုင်းဒေသနေစဉ်(အရုဏ်တက်,hue),တောင်ပိုင်းဒေသ(ဟိုချီမင်းစီးတီး၏တောင်ဘက်)ရှည်လျားသောအပူပိုင်းရာသီဥတုဖြစ်ပါသည်(35 ဒီဂရီ C ကိုမှအကြောင်း 26 ဒီဂရီ C ၏အပူချိန်) )အနည်းငယ်လည်းလေးရာသီအပြောင်းအလဲဖြစ်,ဒါပေမယ့်အရမ်းသိသာမဟုတ်.
အိမ်ခြံမြေနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ကြီးမားသောအရေအတွက်နှင့်အတူ,ဗီယက်နမ်'s ကိုမြို့တော်ငါးရှိပါတယ်-ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်,အကြောင်း 110 မှ 150 ဒေါ်လာအကြားနေရာထိုင်ခင်းကုန်ကျစရိတ်များ.ဖြည့်စွက်ကာ,ဗီယက်နမ်ပုဂ္ဂလိကဟိုတယ်လည်းအတော်လေးဘုံဖြစ်ပါသည်(အကြောင်းကြယ်သုံးပွ),ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့မြို့ထွက်ခွာ(ဟူစီးတီး,ဟနွိုင်း)ပြည်နယ်များသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများ,အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဟိုတယ်များမရှိနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှင်,သာဒေသခံဟိုတယ်,ဆငျးရဲသုံးစက်ကိရိယာများ,စျေးနှုန်း 20 ခန့်မှ 60 ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်.ထိုင်ဝမ်ကလူဗီယက်နမ်မှလာ,ဒါကြောင့် https ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်://TW.ဟိုတယ်များ.com စာအုပ်ကြိုတင်မဲအတွက်ဟိုတယ်,စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်. အကောင်းမြင်(အခွန်နှင့်နံနက်စာသုံးဆောင်ခြင်းရှိမရှိ),အထူးသဖြင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများရှိကြိုတင်မဲနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စရပ်များအတွက်အတည်ပြုသင့်တယ်.
ဗီယက်နမ်'တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာ့အသွားအလာစနစ်က,ဟနွိုင်းနှင့်ဟိုချီမင်းစီးတီးနှင့်အခြားကြီးမားသောမြို့ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသမာဓိ,ဘတ်စ်ကားပစ္စည်းကိရိယာများဆင်းရဲ,ဒါပေမယ့်ဗီယက်နမ်နေဆဲအများအားဖြင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များမှာ-based tool ကို.အဆိုပါဗီယက်နမ်အစိုးရလည်းတက်ကြွစွာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အစီစဉ်လျက်ရှိသည်.ဟနွိုင်းနှင့်ဟိုချီမင်းစီးတီးယခု MRT ကိုတည်ဆောက်နေကြတယ်.မြို့ပြဒေသများရှိ,သငျသညျအရမ်းအဆင်ပြေတက္ကစီဖြစ်ပါသည်လည်းခရီးသွားလာနိုင်,မိမိအလိပ်စာဘာသာစကားအတားအဆီးဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်,အများဆုံးတက္ကစီတမင်တကာလမ်းလွှဲမည်မဟုတ်,စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့အမြို့ဆင်ခြေဖုံးမှ,ကားတစ်စီးဖြစ်သို့မဟုတ်ကောင်းသောအချိန်အတွက်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုကုန်ကျစကားပြောသင့်တယ်-ထိရောက်သော.
ပိုများသောလူယေဘုယျအားဖြင့်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနားမလည်ကြဘူး,စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်(အစိုးရအေဂျင်စီများအပါအဝင်),နိုင်ငံခြားဘာသာစကားအကျွမ်းတဝင်လည်းကန့်သတ်သည်,ဤသို့ကပိုပြီးစီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများ,စကားပြန်များ၏အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု,ထို့အပွငျအတွက်အဆင်ပြေအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့,အဖြစ်အခြားထိုကဲ့သို့သော:အသွားအလာ,အပြည့်အဝအကူအညီရယူပါ.ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အများအပြားဘာသာပြန်များရှိပါတယ်,သာအင်္ဂလိပ်,တရုတ်,ဂျပန်,ပြင်သစ်,နှင့်ရုရှားဘာသာပြန်များ.ဘာသာပြန်များ၏ပျမ်းမျှနေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်အကြားဖြစ်ပါသည်$50 နှင့်$100 က,ဒါပေမဲ့ 8899 ပိုပြီးငွေကုန်ကြေးဖွစျလိမျ့မညျ.ပိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အများကြီးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရှိပါတယ်,ဒေသခံန်ထမ်းများ၏အလုပ်အကိုင်,ယခင်ကယာယီဘာသာပြန်များအလုပ်လုပ်နေကြတယ်.
ဗီယက်နမ်ငွေကြေးဗီယက်နမ်ဒေါင်ဖြစ်ပါတယ်,ယခု(ဇန်နဝါရီလ 2016)အကြောင်းမှ 22 နှင့်ညီမျှသော 1 အမေရိကန်ဒေါ်လာ,500 VND,500 ၏နောက်ခံလူမျက်နှာတန်ဖိုးကို,1,000,2,000,5,000,10,000,20,000,50,000,100,000,200,000 နှင့် 500,000 တဆယ်ယူနစ်,ဖြည့်စွက်ကာ,ဗီယကျနမျအစိုးရဒင်္ဂါးပြားထုတ်ပေးမထားပါဘူး.ဗီယက်နမ်နိုင်ငံခြားရေးလဲလှယ်ထိန်းချုပ်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရန်,န့်အသတ်ပမာဏတင်သွင်း,ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ရေး.ဒေါ်လာစျေးဖော်ပြထားခြင်းမှဘဏ်အပ်ငွေဒေါ်လာအတွက်အပြင်ကလူ,လည်းအသုံးပြုမှုများ၏လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်သက်သေပြထွက်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်.အခြေခံသဘောအရ,ဒေါ်လာစျေးဗီယကျနမျဈေးကွက်ထဲမှာသုံးစွဲဖို့တားမြစ်ထားသည်,ဒါပေမဲ့တကယ်တော့,ဒေါ်လာစျေးစျေးနှုန်းသုံးပြီးအချို့စတိုးဆိုင်များနေဆဲရှိပါတယ်,ဒါပေမယ့်လည်းဒေါ်လာစျေးကုန်သွယ်ကိုလက်ခံ,အနည်းငယ်အခါသမယ,ပင်ဒိုငျးလှားကို၏စျေးနှုန်းလျှင်,ဒေါ်လာစျေးဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြစ်ပါသည်.ဖြည့်စွက်ကာ,ခရီးသည်များအသုံးပြုခြင်း'ဗီယက်နမ့်စစ်ဆေးမှုများဘုံမဟုတ်ပါဘူးနှင့်လဲလှယ်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်,ဒေါ်လာစျေးငွေသားနေဆဲလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါသည်,ခရက်ဒစ်ကဒ်ငွေပေးချေမှု,ကြီးမားသောဟိုတယ်နှင့်စီးပွားရေးပြင်ပမှာလူတချို့အပြင်-oriented စတိုးဆိုင်များ,အများဆုံးဆိုင်တွေအကြွေးကဒ်များကိုလကျမခံပါဘူး,ဖောက်သည်အတွက်ခရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်ဆပ်ဖို့,ဆဲ2add ရန်လိုအပ်ပါတယ်%3%ထိုအခကြေးငွေများ(ဟိုတယ်ဒီရှိသည်ပါဘူး),ဒီတော့ပိုမိုသုံးစွဲမှု,ထိုခရက်ဒစ်ကဒ်ဆပ်ဖို့မယ်ဆိုရင်,ထိုကြေးပေးဆောင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုတ်မဟုတ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အကောင်းဆုံးက,မဟုတ်ရင်,သို့မဟုတ်ငွေသားမှ(VND သို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ)ဆပ်ဖို့သင့်လျော်သည်.
ဗီယက်နမ်အများပြည်သူတယ်လီဖုန်းဘုံမဟုတ်ပါဘူး.စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့လာရန်,သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုရောက်စေဖို့အကောင်းဆုံးက,လက်ရှိပါ Roaming ဝန်ဆောင်မှုအကြားထိုင်ဝမ်နှင့်ဗီယက်နမ်တို့တယ်လီကွန်း,ထိုင်ဝမ်ကလူကိုကြိုတင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်,သငျသညျပါ Roaming ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုချင်ကြပါလျှင်,သင်သည်လည်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်ကတ်ကို prepaid မိုဘိုင်းဖုန်းမဝယ်နိုင်,စြေးပေါသော(300 ခန့်,000 VND),ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သော.နှစ်ဦးကြိုတင်ရှိပါတယ်-Mobicard မှာကတ်များပေးဆောင်(0903 နှင့်အတူစတင်,0904)နှင့် Vinacard(0912,0913)တူညီတဲ့စျေးနှုန်းမှာ.ဖြည့်စွက်ကာ,တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှု 177 သို့မဟုတ် 178 ဂဏန်းထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်;ထို့နောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ code ကို 00 dial ဆက်လက်,တိုင်းပြည် code ကို(ထိုင်ဝမ် 886),မြို့ code ကို,လူနေအိမ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအရေအတွက်,စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်.0င်ဖို့ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်.တစ်မိနစ်လျှင် 8 အမေရိကန်ဒေါ်လာ.
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်စားသုံးမှု,ပိုပြီးလူပျဉ်းရေသွန်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ,သင်မူကား, ရေသွန်နိုင်လျှင်စားရန်ထွက်သွား,သို့မဟုတ်မပြောင်းပါဘူးတဲ့တက္ကစီယူ,စတဲ့လူကြိုက်များတဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါသည်.ဟိုတယ်ထဲမှာ,အိတ်ယူကိုကူညီဖို့စားပွဲထိုး,များသောအားဖြင့်အသက် 20 မှ 1 သန်းပိုပြီးပေးထား,ပိုပြီးငွေကြေးနိုင်ပါတယ် 000 ယွမ်.
ငါးများအတွက်ဗီယက်နမ်ပညာရေးစနစ်,လေး,သုံး,မူလတန်းကျောင်း၏ငါးနှစ်ကြာကြောင်းလေး system ကို,လေးနှစ်ငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်း,သုံးနှစ်အဘို့အထက်တန်းကျောင်း,ကောလိပ်၏လေးနှစ်(ငါးနှစ်ကြာဗိသုကာပညာဦးစီးဌာန၏တစိတ်တပိုင်း,ခြောက်နှစ်ဆေးဘက်,ဒေါက်တာ.နှစ်ဦးမှလေးအနှစ်),အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းမှကိုးနှစ်အမျိုးသားရေးမသင်မနေရပညာရေး.
လက်ရှိအချိန်မှာ,ဟနွိုင်းအများအပြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းများတွင်ရှိပါတယ်,အောက်ပါတို့အပါအဝင်: (1)ဒုတိယတန်းဖို့သူငယ်တန်းမှဟနွိုင်း၏ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းစာအုပ်,ကျောင်းရာသီ,100 ကျော်ဆရာ, ဆရာမ,အားလုံးအင်္ဂလိပ်အတန်းထက် ပို.. (B က)ဟနွိုင်းနိုင်ငံတကာကျောင်းမှ(ဟနွိုင်းနိုင်ငံတကာကျောင်းမှ)သူငယ်တန်းကနေ 12 နှစ်အထိ,နှစ်ဦးပညာသင်ကာလ. (ကို C)စင်္ကာပူကိုနိုင်ငံတကာကျောင်းမှ(စင်္ကာပူကိုနိုင်ငံတကာကျောင်းမှ)သူငယ်တန်းကနေနဝမတန်းမှ,ကျောင်းကာလ.
အဆိုပါဟနွိုင်းဧရိယာသည်လက်ရှိတွင်ဗီယက်နမ်ရေဒီယို station ရှိပါတယ်,ဟနွိုင်းရေဒီယိုဘူတာလေးနှင့် FM ရေလိုင်းများ,နှင့် 18 နာရီထုတ်လွှင့်(5:00 မှ 23:00)နေ့စဉ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ထုတ်လွှင့်,ပြင်သစ်,ရုရှား,စပိန်,တရုတ်ဗမာနှင့်အခြားသတင်းစီးရီးတဆယ်မိနစ်နှင့်ဗီယက်နမ်အစီအစဉ်သင်ယူ.တီဗီဗီယက်နမ်တရုတ်ဗဟိုရုပ်မြင်သံကြားရှိပါတယ်(သုံးလိုင်းများ)နှင့်ဟနွိုင်းကို TV,အင်္ဂလိပ်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုင်းသည်တဆယ်မိနစ်,ပြင်သစ်သတင်း.လည်းဒေသခံရုပ်မြင်သံကြားဘူတာကို set up အခြားပြည်နယ်များ,CCTV ကင်မရာအစီအစဉ်များအဓိကအားဖြင့်ဖြန့်ဝေ.
ဗီယက်နမ်,ကုလသမဂ္ဂပညာရေးများအတွက် Longwan နှင့်ဗဟို Shunhua Ruan ရှေးခေတ်အပျက်အယွင်း၏မြောက်ဘက်,,သိပ္ပံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့(ယူနက်စကို)ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဖြစ်'s ကိုခရီးသွားလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှု,အိုင်နားအပန်းဖြေဘို့ Vung Tau နှင့် Nha Trang,နွေရာသီအပန်းဖြေစခန်းအဖြစ် Dale,လှပသောရှုခင်း,အရှေ့တောင်အာရှ၏အဓိကဆိပ်ကမ်းဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည်,တရုတ်များ၏ပေါင်းစည်းမှု,ဂျပန်,ဗီယက်နမ်ဗိသုကာစတိုင်,လူမှစားကျက်စဉ်းစား;သမိုင်းအပန်းဖြေစခန်း၏ပြင်သစ်သိမ်းပိုက်တပ်ဖွဲ့များအနိုင်ယူဖို့ဗီယက်နမ်သည်အအနောက်မြောက်ဘက်ဝန်ကြီးတွေ.ဗီယက်နမ်လက်ရှိဘ Vi ရှိပါတယ်,Cuc Phuong,ကြောင်ဘ,Bach Ma,ကြောင် Tien နှင့်အခြားငါးအမျိုးသားဥယျာဉ်များ,ယေဘူယျအားဖြင့်,ဗီယကျနမျသာယာလှပအစက်အပြောက်များအများဆုံးမူရင်းအသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့.
ဟနွိုင်း Lake နှင့်ပိုပြီးသစ်ပင်များ,စိမ်းလန်းသော,အနောက်ရေကန်,hoan Kiem Lake,လီနင်ပန်းခြံ,အများပြည်သူအပန်းဖြေသည့်အဓိကနေရာဟိုချီမင်းအောက်မေ့ရာခန်းမ,ပြခန်းမကြာခဏပြပွဲကျင်းပ.လေးအဓိကပြတိုက်,သမိုင်းဆိုင်ရာပြတိုက်,တော်လှန်ရေးသမားပြတိုက်,စစ်ရေးပြတိုက်,အမျိုးသားရေးအနုပညာပြခန်း,နှင့်သမိုင်းပြတိုက်စစ်အားဖြင့်ဖျက်ဆီးခံရခြင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာဆုံးရှုံးမှုခံစားခဲ့ရခဲ့သည်.ယဉ်ကျေးမှုနန်းတော်နှင့်ဟနွိုင်းကဇာတ်ရုံကိုမကြာခဏအမျိုးမျိုးသောယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုများစည်းရုံး,ထူးခြားသောရေရုပ်သေးပြပွဲရှိပါတယ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.vietnam-investment.com/my/vietnam-information-2.html